जीवनको बग्गी तान्ने मेहनत - Safal Stories
Home Short Stories जीवनको बग्गी तान्ने मेहनत
महान भायोलिनवादक फ्रिट्ज क्रिस्लरले एकपटक, आफ्नो एकल कार्यक्रम. प्रस्तुत गरे। कार्यक्रम सकिना साथ एकजना मान्छे, खुरुखुरु मंचमै चढ्यो । उसले भन्यो, ” भायोलिन अति सुन्दर ढंगले बजाउनुभयो । तपाईंले झैं बजाउने रहर ममा पनि जागेर आएको छ । यसरि बजाउन जानेमा त म, आफ्नो पूरा जीवन यसैमा लगाइदिनसक्छु ।” क्रिस्लरले भने, ” मैले त लगाइनैसकें ।”
सफलतालाई फ्याट्ट तानेर हाम्रो अगाडीपट्टि राखिदिने जादुको छडी, आजसम्म भेटिएको छैन। सफलतालाई त, मेहनत गर्नेहरुले पाउँछन्, हेर्नेले हैन। बग्गी तान्ने घोडाले लात्ती हान्न सक्दैन र लात्ती चलाउने चाहिंले बग्गी तान्दैन । हामी पनि लात्ती हान्न छोडेर, जीवनरुपी बग्गी तान्न सुरु गरौँ। स-साना उपलब्धीको लागि पनि कडा मेहनत आवश्यक हुन्छ।
साभार: तपाईंको जीत, शिव खेडा, पेज नं. ७३
Previousनिराशाबाट म यसरि निस्किएँ
Nextकुशल नेतृत्वको लागि केही सुझाव